प्रायः सोधिने प्रश्न - वूपशप ®
कार्ट / ₴0.00 0
उत्पादन कसरी खोजी गर्ने?
तपाईंले उत्पादनको नाम वा कुञ्जीपाटी पृष्ठको शीर्षमा खोज पट्टीमा प्रविष्ट गरेर उत्पादहरूको खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्य विवरण प्रविष्ट गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईले प्रयोग गर्नुभएका थप खोजशब्दहरू, तपाईले कम उत्पादनहरू परिणाम पेजमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं खोजी गर्न कोटी श्रेणी चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
शिपिंग लागत कसरी गणना गरिन्छ?
हामी मा WoopSop हाम्रो ग्राहकहरु लाई सबै उत्पादनहरु मा एक अन्तरराष्ट्रीय नि: शुल्क नौवहन प्रदान गर्नुहोस, विप विप!
क्रेता संरक्षण के हो?
क्रेता संरक्षण ग्यारेन्टीहरूको किट हो जसले जसले ग्राहकहरूले हाम्रो वेबसाइटमा विश्वस्ततासँग खरिद गर्न सक्षम गर्दछ।
तपाईं जब सुरक्षित:
तपाईंले आदेश दिनुभएको वस्तु प्रतिज्ञा गरिएको समयमा भित्र आएन।
तपाईंले प्राप्त वस्तु रूपमा वर्णन गरिएको छैन।
तपाईं साँचो हुन आश्वासन थियो पाएको वस्तु नक्कली थियो।